I-India Izokwethula IDrayivu Yokugoma ye-COVID-19 NgoJanuwari 16 - Ezindabeni
I-India Izokwethula IDrayivu Yokugoma ye-COVID-19 NgoJanuwari 16
India Will Launch Covid 19 Vaccination Drive January 16
Isithombe: Izikhathi ze-India
Uhlelo lokugoma i-COVID-19 eNdiya kuhlelwe ukuthi luqale ngoJanuwari 16, njengokukhishwa kwabezindaba nguhulumeni omkhulu ngoMgqibelo. Idrayivu enkulu ihlelelwe ukwethulwa ngemuva nje kwemikhosi efana noMakar Sankranti, uLohri, uBihu, uPongal nabanye. KuTwitter, uNdunankulu uNarendra Modi uthe, “Ngomhlaka 16 Januwari, i-India ithatha igxathu eliyingqophamlando ekulweni ne-COVID-19. Kusukela ngalolo suku, uhlelo lokugoma izwe lonke lwaseNdiya luyaqala. Kuzobekwa eqhulwini kodokotela bethu abanesibindi, abasebenzi bezempilo, abasebenza phambili ababandakanya uSafai Karamcharis. ”
Ngenkathi kuzobekwa eqhulwini abasebenzi abalinganiselwa kwabathathu bezokunakekelwa kwezempilo kanye nabasebenza phambili ezweni, izakhamizi ezingaphezulu kweminyaka engama-50 kanye namaqembu abantu abangaphansi kweminyaka engama-50 abanezifo ezibambisene nabo kulindeleke ukuthi babe ngabalandelayo.
UNdunankulu ubengamele umhlangano osezingeni eliphezulu ngoMgqibelo, obuthanyelwe nguNobhala Oyinhloko kuNdunankulu, uNobhala weKhabhinethi, uNobhala Wezempilo nezinye izikhulu. Kanye nokubukeza isimo se-COVID-19 ezweni, ukulungela kwamazwe kanye nezindawo zeNyunyana zokugoma i-COVID-19 kwaxoxwa ngakho. Ngemigudu emibili eyomile yemithi yokugoma i-COVID-19 eyenziwe ezweni lonke, uhulumeni uzame ukuqonda indlela engcono yokuhlinzeka umuthi wokugoma nokuhlonza nokuvala noma iziphi izikhala ekuqeqesheni, ekusetshenzisweni kwempahla, njll.
UNdunankulu, enkulumweni yakhe yamuva ye-16 yePravasi Bharatiya Diwas, uthe iNdiya isilungile ngemithi emibili yokugoma i-COVID-19 ukuvikela ubuntu, nokuthi umhlaba wonke ubalindile, futhi uzobheka nokuthi iNdiya iliphatha kanjani elikhulu kunawo wonke emhlabeni ukugoma idrayivu. Ubuye wancoma impi yezwe yokulwa nalolu bhubhane, wathi i-India ingelinye lamazwe anesibalo esiphezulu sokululama kanye nezinga lokufa kwabantu eliphansi kakhulu. Ubuye wengeza ukuthi, njengoba iyikhemisi lomhlaba, i-India inayo futhi iyaqhubeka nokuhlinzeka ngemithi ebalulekile kuwo wonke umuntu odinga umhlaba wonke, nokuthi indlela izwe ebime ngayo ndawonye ngesikhathi se-COVID-19 ayinakuqhathaniswa.
Umlawuli wezidakamizwa waseNdiya, iCentral Drugs Standard Control Organisation (CDSCO), usanda kuvumela imijovo emibili yokugoma – umuthi wokugoma i-Oxford COVID-19, owenziwe yiSerum Institute, kanye neCovaxin yeBharat Biotech, eyakhiwe ngokwendabuko futhi eseyenziwe kuvunyelwe ukusetshenziswa okuphuthumayo okuvinjelwe eNdiya.
Funda kabanzi: Ithimba Le-All India Labesifazane Abashayeli Bendawo Lakha Umlando
chaza ngokuningiliziwe izingxenye zokuqina komzimba
isinyathelo esinqunyiwe sezinwele eziphakathi
imikhiqizo yemvelo yokukhula kwezinwele
ungayisebenzisa kanjani i-baking soda yokwenza mhlophe isikhumba